Abasindileyo-Abalahlekileyo eHonduras, umboniso wenyani kwi-iPhone yakho | IPhone iindaba
Ayisiyiyo kuphela imeko yesinema esiza kuthi ngohlobo lwesicelo. Kutshanje bendithetha ngale ndlela malunga nento yokuba kubonakala ngathi yonke imveliso yokugqibela yefilimu ihamba nesicelo, njengoko kwenzekileyo IBatman VS Superman y Isiporho, kodwa umabonwakude akakude emva, kwaye kuncinci ngemicimbi kamabonwakude enje Abasindileyo. Nokuba siyasithanda isikhululo sikamabonwakude okanye asithandi, inyani kukuba olu hlobo lwenkqubo lugubungela phantse bonke ababukeli kwaye lushiya iimvuthuluka kwabanye. Sithetha ngabasindileyo-abalahlekileyo eHonduras, ukusetyenziswa kwe Abasindileyo edume kakhulu kwiVenkile ye App.
Ndiyabulela kulo mdlalo kucingelwa ukuba siza kuhlala ngendlela ebonakalayo amava abathathi-nxaxheba ahlala kwezi ziqithi. Olu hlelo lwangaphambili lwalubanjelwe eHonduras kwaye luthembekile kumdlalo. Ukusinda kuya kuba yinto ephambili, kufuneka sihlangabezane nemingeni kunye neemvavanyo Kwaye kuhlala kuyonwabisa, ukuba asithobeli, isimilo sethu asizokwazi ukuqhubela phambili njengoko kufanelekile. Ukuba uyayithanda le ntlobo, nangona kunjalo icandelo legraphic ayisiyiyo eyona ndawo inamandla yesicelo. Nantsi indlela umphuhlisi ayizisa ngayo kuthi:
Kwiparadesi yetropiki, iintshatsheli kufuneka zilwe ukufezekisa amaphupha azo: ukufumana kunye nokugcina isihloko seyona ndawo ibalaseleyo. Zijikele kwindalo esindayo ekhuthazwe ngumboniso weTV. Ukufezekisa oku, abadlali kufuneka bazicel 'umngeni ngokwabo, bajongane nendalo kwaye bazi ukuba bangabahlobo njani kwiqela. Yenza isimilo sakho, ufumane ukutya kunye nezixhobo zokuphucula inkampu kunye nokuthuthuzela kweqela. Gcina amandla awaneleyo okuvavanya kwaye wandise ukuthandwa kwakho ukuthintela ukususwa.
Vula ukungakhuseleki kunye neebhonasi zentuthuzelo ngexesha lokulingwa kwaye uzisebenzise kumzuzu ofanelekileyo ukoyisa abachasi bakho kwaye ube ngumgqatswa wokugqibela osele kwesi siqithi.
Phila ngamava abasindileyo:
-Imibuzo emi-4 ephefumlelwe ngumboniso kamabonwakude.
-Zenzele owakho amava.
-Yakha kwaye ulawule inkampu yakho.
-Thatha inxaxheba kumzamo odibeneyo kunye nokufumana igama.
-Fumana onke amanqaku omboniso weTV: ibhunga, abasindileyo kunye neemvavanyo.
-Ndidlala iSpanish ngokupheleleyo.
Ke umdlalo ufumana amanqaku amahle kwiVenkile ye App kwaye okwangoku sixela loo nto Ihlala malunga ne-180 MB kwimemori yesixhobo sakho, ngumdlalo okhanyayo wento ekulindeleke ngokwenene. Umdlalo ukhululeke ngokupheleleyo, njengoko wawungekho ngaphambili, kodwa kubandakanya iintlawulo ezihlanganisiweyo.
Abasindileyo-abalahlekileyo eHonduras-uHlelo lwaSimahlaMahala
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Abasindileyo-Abalahlekileyo eHonduras, umboniso wokwenyani kwi-iPhone yakho
Spotify kungenwe kuyo. Kuya kufuneka utshintshe iphasiwedi NGOKU